नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका – गैंडाकोट स्वाभिमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका
March 8, 2018 March 7, 2018 by GCOS
३८औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा गैंडाकोट स्वाभिमान साकोसद्वारा आयोजित “नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका” विषयक अन्तर माध्यमिक विद्यालय स्तरीय निबन्धलेखन प्रतियोगितामा प्रथम स्थान प्राप्त निबन्ध:
सहकारी भन्नेवित्तिकै समान आकाङ्क्षा र आर्थिक स्थिति नाजुक भएका मानिसहरूको समूहगत प्रयासबाट आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप अवलम्बन गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ । सहकारीका माध्यमबाट मानिसले आआÇनो हैसियतअनुसारको रकम जम्मा गर्ने र आवश्यक परेका बेला ऋण लिई आय–आर्जन गरी आआÇनो हैसियत उकास्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । आज विश्व परिवेशमा सहकारी आर्थिक विकासको एउटा महŒवपूर्ण खम्बाका रूपमा विकास भइरहेको छ र यसैका आधारमा समाज परिवर्तन, आर्थिक आयामहरूको पहिचान र विकासको कार्य सम्भव भएको देखिन्छ ।
सहकारीका पिताका रूपमा परिचित रोवर्ट ओवेनका अनुसार ‘फुटकर उपभोग्य उत्पादनका सेक्टरमा सहकारितामा आधारित उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापन गरेर मात्र उत्पादन बढाउन, शोषणबाट बच्न र सामूहिक हितका लागि काम गर्न सकिन्छ । महात्मा गान्धीका अनुसार सहकारीमा सबै बराबर हुने भएकाले यसमा कुनै बलियो र कमजोर भन्ने हँुदैन । यो सहकारीको सुन्दर पक्ष हो । रविन्द्रनाथ टैगोरका अनुसार सहकारी केवल एउटा विधि अथवा प्रणाली मात्र नभएर एउटा विचार हो जसले असंख्य उपाभोगको विकास गरेको छ । त्यसैले यी समग्र भनाइहरूबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं भने देशको आर्थिक रूपान्तरण, गरिबी न्यूनीकरण, उपभोग्य उपात्दन र उच्चतम व्यवस्थापनका लागि सहकारी नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको मानिन्छ । सहकारीका सात सिद्धान्तहरू रहेका छन् । सात सिद्धान्तहरूको जगमा सहकारीको सञ्चालन भएको हुन्छ । जसका कारणले विकासको कार्यमा सहकारीले मेरुदण्डको जस्तै काम गरिरहेको हुन्छ ।
नेपालको सहकारीको इतिहासलाई नियाल्दा विभिन्न पर्म र गुठीका रूपमा सहकारी प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यी प्रयासहरूबाट देशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भयो र वि.सं. २०१३ चैत्र २० गते नेपालमा पहिलोपटक चितवनमा बखान ऋण सहकारी नामक संस्थाको स्थापना भयो । हाल नेपालमा ३३ हजारभन्दा बढीको संख्यामा सहकारीको स्थापना भएको पाइन्छ । सहकारी विभिन्न किसिमका रहेका हुन्छन् । जस्तै बचत तथा ऋण सहकारी, कृषि सहकारी, जुनार सहकारी आदि । हाल नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संख्या सबैभन्दा बढी (४१.२१ प्रतिशत) रहेको छ भने कममा जुनार सहकारीको रहेको छ ।
कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका निम्ति सहकारीले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसले ससानो मात्राको बचत परिचालन गर्दछ । यदि ससानो मात्राको बचतलाई एकत्रित गर्न सकियो भने वा यस्ता किसिमका रकमलाई आवश्यक परेका बेला ठूलो गर्जो टार्ने विषयको जानकारी दिन सकियो भने मानिसमा रकम बचत गर्ने बानीको विकास हुन्छ । सहकारीका माध्यमबाट दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक बचत योजना बनाएर रकमलाई एकत्रित पार्न सकिन्छ ।
मानव जीवनमा आर्थिक अप्ठ्याराहरू परी नै रहन्छन् । यस्तो समयमा साहुमहाजनहरूले झन् निर्दयी व्यवहार देखाउने प्रवृत्ति प्रचलनमा रहेको छ । यस्ता किसिमका समस्याको समाधान गर्न सहकारीले आकस्मिक रकमको व्यवस्था गरेको हुन्छ । सहकारीले विभिन्न वर्गका मानिसहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको हुन्छ । बाख्रा पालन र मत्स्य पालन गर्न सहकारीले अभिप्रेरित गरेको हुन्छ । सहकारी निश्चित मापदण्डका रूपमा विकास हुने हुँदा मानिस ठगिने वा अनावश्यक झन्झटबाट फस्ने काम न्यून रहेको हुन्छ । सहकारीमा सबैको हक, अधिकार र कर्तव्य समान हुने हुँदा सहकारी एउटा साझा चौतारी बन्न सक्छ । जसमा बसेर मानिसले आÇनो र समाजको विकासका कार्यमा सघाउन सक्छ ।
आजको क्रियाकलापमा भोलिको योजना गर्नु र भविष्यमा सुखमय जीवनका लागि मितव्ययिता र अनुशासन आवश्यक पर्ने हुन्छ । सहकारीले यसमा निकै महŒवपूर्ण भूमिका निभाएको हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान झन्डै २१ प्रतिशत रहेको छ भने मुलुकको कुल गार्हस्थ क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएको पाइन्छ । सहकारीले विभिन्न तहमा रहेको युवा जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ र वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच विस्तार गरेको छ । त्यसैले सहकारीको योगदान अतुलनीय रहेको छ ।
सहकारीले विभिन्न चुनौतीको पनि उत्तिकै सामना गर्नुपरेको छ । सहकारी सहकारीबीच र सहकारी बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । जसका कारणले सहकारीको समग्र विकास र जनसाधारणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । यसका कारणले आम मानिसहरूको सहकारीप्रतिको दृष्टिकोण बदलिएको छ ।
यस्ता कतिपय क्रियाकलापले सहकारीको मर्म र भावनामाथि नै कुठाराघात गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सोझासाझा मानिसलाई ऋण दिएवापत कमिसन लिने अनावश्यक तिकडम बाजी गर्ने आदिका कारणले आम जनतामा नकारात्मक सोच पैदा भएको छ । यो पनि सहकारीका लागि चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । यस्ता समस्या र चुनौतीका बाबजुद पनि सहकारी आफैमा एक आदर्श र सामूहिक भरपर्दो माध्यम बन्दै गएको छ । विश्व इतिहासमा सहकारीका रूपान्तरणका उदाहरणहरू थुप्रै भेटिन्छन् । नेपालमा सहकारी संस्थाका छिटपुट बदमासीका कारण समग्र सहकारीमा पर्ने नराम्रो प्रभावलाई हटाउन सहकारी शिक्षा, यसको महŒव र आर्थिक विकासका लागि रचनात्मक हिसाबले लागिपर्नु आवश्यक देखिन्छ । आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जना एवं स्रोत साधनको विकासका लागि नीति नियमको समयसापेक्ष परिमार्जन गरी स्पष्टता प्रदान गर्न, असल नियतले काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन बढाउन र ग्रामीण भेगमा गई सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि सहकरीको विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा नै बहस प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव कार्य ग¥यौं भने सहकारी एक दर्बिलो खम्बाका रूपमा विकास हुने सम्भावना देखिन्छ । ‘एक थुकी सुकी सय थुकी नदी’ भनेझैं सहकारीमा थोरै थोरै रकम बचत गर्नाले भविष्यमा त्यसको ठूलो काम आउने हुँदा सहकारीले मानव समुदायलगायत अन्य क्षेत्रमा विकास गर्नमा मद्दत पु¥याएको छ । त्यसैले सहकारीको विकास भयो भने देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहजै विकास हुने कुरा निश्चित छ । धन्यवाद ।
प्रशंसा सुवेदी गैडाकोट नमुना मा.वि. गैंडाकोट–२, नवलपुर
Categories Social Presence, नेपाली (Nepali)	Post navigation